Shina Thermal gel kapila fanafanana gel sy mpanamboatra | Huanyi
Material: satin lamba fitambaran PVC coating
Size: 47cm ny savaivony, 600g
Color: mavokely mahazatra, loko azo namboarina raha mihoatra ny 2000 pcs ny habeny
Fampiasana: Aorian'ny shampooing dia apetaho amin'ny fomba mitovy ny crème mofomamy, manaova satroka fandroana azo arotsaka, ary arotsaho amin'ny hafanana avo lenta ao anaty microwave mandritra ny 2-3 minitra ny fonosana. Rehefa manodidina ny 35-45 degre ny mari-pana dia anaovy azy mandritra ny 15 minitra. Mety amin'ny perm, fikolokoloana aorian'ny loko ary ny fikojakojana ny kalitaon'ny volo isan'andro.
Fampiasana:Aorian'ny shampooing dia apetaho amin'ny fomba mitovy ny crème mofomamy, manaova satroka fandroana azo arotsaka, ary arotsaho amin'ny hafanana avo lenta ao anaty microwave mandritra ny 2-3 minitra ny fonosana. Rehefa manodidina ny 35-45 degre ny mari-pana dia anaovy azy mandritra ny 15 minitra. Mety amin'ny perm, fikolokoloana aorian'ny loko ary ny fikojakojana ny kalitaon'ny volo isan'andro.
1. 10 taona niainana ny OEM, ODM, namboarina loko, sary famantarana, fonosana. Afaka manome anao soso-kevitra matihanina amin'ny fampiasana sy fitehirizana, hisorohana ny famoahana na ny ahitra.
2. Ny orinasa dia manana mihoatra ny 20 ny tsipika famokarana, ny milina fanontam-pirinty UV, ny atrikasa Silkscreen dia afaka mameno ny zavatra takinao amin'ny sary famantarana, izahay koa manazatra ny kitapo adidy amin'ny tenanay afaka manangona mazava tsara ny satranao.
4. Ho an'ireo gel nampangainina cap kely habe mety ho tery be tsy mahazo aina, ny orinasanay manana habe lehibe kokoa noho ny safidinao, afaka mifanaraka amin'ny olona maro.
Previous: Mpanamboatra fonosana ranomandry ho an'ny aorian'ny nahaterahana - fonosana ranomandry ankizy - Huanyi
Cap misy hafanana lalina
Volo perm perm
satroka mitete volo
satroka volo matory
Satroka gel mafana
Satroka mafana mafana